搜索 Ka 的结果：
ka：pron．interr．[Sk．kaḥ] m．ko f．kā n．kiṃ 變化表：sg．m．nom．ko，sg．n．nom．kiṃ，sg．f．nom．kā，sg．m．f．acc．kaṃ，sg．n．acc．kiṃ，sg．m．n．instr．kena，sg．f．instr．kāya，sg．m．abl．kasmā，sg．n．abl．kamhā，sg．f．abl．kāya，sg．m．dat．gen．kassa，sg．n．dat．gen．kissa，sg．f．dat．gen．kassā，kāya，sg．m．loc．kasmiṃ，sg．n．loc．kamhi，kismiṃ，sg．f．loc．kassā，kassaṃ，kāyaṃ，pl．nom．acc．m．ke，pl．nom．acc．n．kāni，pl．nom．acc．f．kā，kāyo，pl．instr．abl．m．n．kehi，pl．instr．abl．f．kāhi，pl．dat．gen．m．kesaṃ，pl．dat．gen．n．kesānaṃ，pl．dat．gen．f．kāsaṃ，kāsānaṃ，pl．loc．m．n．kesu，pl．loc．f．kāsu．katama，katara 哪個的（which），koci m．無論（不管）誰（whoever），任何人（anybody），kāci f．，kiñci n．某種，某些（some，something） [這個變化以 ka 為（基）準] kadā 何時．kattha 在何處．kathā 哪種，哪樣，什麼樣（what kind of）．kaha 幾日．kahaṃ 在何處．
ka：pron．interr．[Sk．kaḥ] m．ko f．kā n．kiṃ 變化表：sg．m．nom．ko，sg．n．nom．kiṃ，sg．f．nom．kā，sg．m．f．acc．kaṃ，sg．n．acc．kiṃ，sg．m．n．instr．kena，sg．f．instr．kāya，sg．m．abl．kasmā，sg．n．abl．kamhā，sg．f．abl．kāya，sg．m．dat．gen．kassa，sg．n．dat．gen．kissa，sg．f．dat．gen．kassā，kāya，sg．m．loc．kasmiṃ，sg．n．loc．kamhi，kismiṃ，sg．f．loc．kassā，kassaṃ，kāyaṃ，pl．nom．acc．m．ke，pl．nom．acc．n．kāni，pl．nom．acc．f．kā，kāyo，pl．instr．abl．m．n．kehi，pl．instr．abl．f．kāhi，pl．dat．gen．m．kesaṃ，pl．dat．gen．n．kesānaṃ，pl．dat．gen．f．kāsaṃ，kāsānaṃ，pl．loc．m．n．kesu，pl．loc．f．kāsu．katama，katara 何れの，koci m．誰か，kāci f．，kiñci n．何か [この變化はkaに準ず] kadā 何時．kattha 何處で．kathā Jいか樣に．kaha 幾日．kahaṃ 何處に．
Ka，（从【疑代】kiṁ），谁，什么，哪个。【阳】：单．主．ko；复．主ke；单．宾．kaṁ；复．宾．ke；单．具．kena；复．具．kehi﹑kebhi；单．离．kasmā﹑kamhā；复．离．kehi﹑kebhi；单．与．﹑属．kassa﹑kissa；复．与．﹑属．kesaṁ﹑kesānaṁ；单．处．kasmiṁ﹑kamhi（﹑kismiṁ﹑kimhi）；复．处．kesu。【阴】：单．主kā；复．主．kā﹑kāyo；单．宾．kaṁ；复．宾．kā﹑kāyo；单．具．kāya；复．具．kāhi﹑kābhi；单．离kāya；复．离．kāhi﹑kābhi；单．与．﹑属．kāya﹑kassā；复．与．﹑属．kāsaṁ﹑kāsānaṁ；单．处．kassā﹑kāyaṁ﹑kassaṁ；复．处．kāsu。【中】：单．主．kiṁ；复．主．kāni；单．宾．kiṁ；复．宾．kāni。Taṁ kissa hetu? 什么原因呢？（所以者何?）
a¿，asū¿=a．（¤ ka kiṃ saddāmha lāso kayueaakiṃ nitea）．
အဘယ်နည်း¿၊ အဘယ်သူနည်း¿=မေးမြန်းခြင်းအနက်။ （၎င်း က သည် ကိံ သဒ္ဒါမှ လာသော ကဖြစ်၍ အကျယ်ကို ကိံ ၌ကြည့်）။
ī ka eiea aniteaso ka，vuddhiso nitea ṇa anupārhieiea．（1） ．（2） sa．（3） a．（4） ．（5） mimimhīrāeieaa（ka eiea amarhi）．（6） a．（7） pra．（8） asaṃpru．（9） souccā．（1va） ，．（11） mhīne．（12） ，rhi．（13） aa．（14） amhu，apruamū．（15） a，rā．（16） pruso．（17） asaññā．（moraka-u tūso morakaaso）．（18） tūññī．（19） sara--．（2va） -khya-．（21） si．（22） limmā--．（23） cuṃ，rhi．（24） khandhā．（25） ma-masisā-．（26） a．（27） pu---．（28）a．（29） ，ce．（3va） yū-yū- yūyueara-．（31） ．
ဤ က သည် ပုဒ်၏ အဆုံး၌ဖြစ်သော ကဖြစ်သည်၊ ဝုဒ္ဓိရောက်သော ပုဒ်၌ ဏ အနုဗန်ပါရှိ၏။ （၁） ကဲ့ရဲ့ခြင်း။ （၂） သနားခြင်း။ （၃） အငယ်။ （၄） စက်ဆုပ်ဖွယ်။ （၅） မိမိမှီရာပုဒ်၏ အနက် （က ၏ သီးခြားကိုယ်ပိုင်အနက်မရှိ）။ （၆） အပေါင်း။ （၇） ထင်ရှားပြခြင်း။ （၈） အသံပြုခြင်း။ （၉） ပိုင်ဆိုင်သောဥစ္စာ။ （၁ဝ） မွေးဖွားခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း။ （၁၁） မှီတင်းနေထိုင်ခြင်း။ （၁၂） ယှဉ်ခြင်း၊ ရှိခြင်း။ （၁၃） အတိုင်းအရှည်။ （၁၄） အမှု၊ အပြုအမူ။ （၁၅） အဖြစ်၊ ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရာ။ （၁၆） ပြုအပ်သော။ （၁၇） အမည်သညာ။ （မောရက-ဥဒေါင်းနှင့် တူသောကြောင့် မောရကအမည်သောငှက်）။ （၁၈） တူညီခြင်း။ （၁၉） သရဇ္ဈာယ်-ရွတ်ဖတ်-ခြင်း။ （၂ဝ） သင်ကြား-ပို့ချ-ခြင်း။ （၂၁） တတ်သိနားလည်ခြင်း။ （၂၂） လိမ္မာ-ကျွမ်းကျင်-ခြင်း။ （၂၃） ပြည့်စုံခြင်း၊ ရှိခြင်း။ （၂၄） ခန္ဓာကိုယ်။ （၂၅） မထင်ရှား-မသိသာ-ခြင်း။ （၂၆） အနည်းငယ်။ （၂၇） ပု-တို-နိမ့်-ခြင်း။ （၂၈） အနက်ကိုပျံ့နှံ့အောင် နှစ်ကြိမ်ဆိုခြင်း။ （၂၉） ရွက်ဆောင်ခြင်း၊ ဖြစ်စေခြင်း။ （၃ဝ） ယူအပ်-ယူထိုက်- ကိုင်ယူ၍ရ-ခြင်း။ （၃၁） သုံးဆောင်ခြင်း။
ī ka eiea anitea so ka，amarhi，lāmyhasā．
ဤ က သည် ပုဒ်၏ အလယ်၌ တည်သော ကဖြစ်သည်၊ အနက်မရှိ၊ ပုဒ်စပ်ရန်လာထားခြင်းမျှသာ။
（1） so，sū．（2） so （arāvatthu）．
（၁） ထင်ရှားသော၊ သူ။ （၂） သေးငယ်သော （အရာဝတ္ထု）။
[ကရ+ကွိ။ ဓာန်၊ ဋီ။ ၆၆၁။]
（1） brahmā．（2） ．（3） le．（4） ne．（5） ．（6） u．（7） ．（8） mre．
（၁） ဗြဟ္မာ။ （၂） ကိုယ်။ （၃） လေ။ （၄） နေ။ （၅） မီး။ （၆） ဥဒေါင်း။ （၇） ယောက်ကျား။ （၈） မြေ။
33- aca ka akkharā，kaṇṭhaja lahu ka-．
ဗျည်း ၃၃-လုံးတို့တွင် အစ က အက္ခရာ၊ ကဏ္ဌဇ လဟု က-ဗျည်း။
ka：[from interrogative pron．kiṃ] who； what； which．
KA：（cách dùng để hỏi của kin） ai，cái gì? cái nào?
（၁） ချမ်းသာ။ （၂） ရေ။ ကာနန，ကမလ-တို့လည်းကြည့်။ （၃） ဦးခေါင်း။ ကဗန္ဓ，ကန္ဓရာ，ကပ္ပရ，ကပါလ-တို့လည်းကြည့်။ （၄） ကြာ။ ကေသရ-ကြည့်။
အဘယ်။ အတီ။ အသူနည်း။
ကော နာမော၊ အဘယ်အမည်နည်း။ ကော ပန ဝါဒေါ၊ အဘယ် ဆိုဖွယ်ရာ ရှိသနည်း။ ကံ ကာလံ၊ အဘယ်အခါ၌။ ကံ အာရဗ္ဘ၊ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို အကြောင်းပြု၍။
kā：[ka 的 f．] 誰，哪個女子．
kā：[ka の f．] 誰，どの女．
kā，疑问代名词 ka / ki（who？what？which？）f．p．对
kā，疑问代名词 ka / ki（who？what？which？）f．p．主
kā，疑问代名词 ka / ki（who？what？which？）f．s．主
kā，（f．），which woman?kaṃ ：[nt．] what thing? kaṃsa ：[m．]aplate to eat from．
Kā，（indecl．） interj．imitating the crow’s cry：kā kā J．IV，72．（Page 202）
အဘယ်မည်သော၊ အဘယ်နည်း၊ အဘယ်အကျိုးရှိသနည်း။
ဘူ = သဒ္ဒေ-အသံပြုခြင်း၌။ ကာတိ၊ ကာယတိ။
ကာ ကထာ၊ အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိသနည်း။
与 Ka 相似的巴利词：